फेरि बढयो सरकारी कर्मचारीको तलब : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि वृद्धि, कति पुग्यो ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/फेरि बढयो सरकारी कर्मचारीको तलब : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि वृद्धि, कति पुग्यो ?
13,272 1 minute read
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलब औसतमा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तलब तथा ज्यालाको औसत विवरणअनुसार समग्रमा कर्मचारीको तलब सूचांक ५३७.४५ छ ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिमा औसत तलब सूचांक ४९१.०७ थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार समग्रमा हेर्दा सरकारी निकायको कर्मचारीको भन्दा निजी क्षेत्रका संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत तलब सूचांक धेरै छ ।
जसमा सबैभन्दा धेरै औसत तलब सूचांक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक ६५३.५० छ । सोही अवधिमा सरकारी निकायतर्फ औसत तलब सूचांक निजामति कर्मचारीको ५४१.८०, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक ४४१.९८ र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतको औसत तलब सूचांक ४८३.७६ छ ।
सरकारी निकाय र अन्य निजी क्षेत्रका संघ–संस्थामा भन्दा वित्तीय क्षेत्रमा औसत आर्कषक तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने हुँदा पनि यो क्षेत्र शिक्षित तथा बेरोजगारलाई रोजगारीको गन्तव्य नै भएको क्लिकमान्डू डटकममा समाचार छ ।
तथ्यांकअनुसार कर्मचारीको तहगत औसत तलब विवरणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको नै औसत तलब वृद्धिदर बढी छ ।अघिल्लो आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकृत तहका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक ४१४.५९ थियो । जुन गत आवको सोही अवधिमा १५.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएर अधिकृतहरुको तलब सूचांक ४७६.९८ पुगेको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साधारण तहका कर्मचारीको तलब सूचांक औसतमा अघिल्लो आवमा ५५५.४८ थियो ।गत आवको सोही अवधिका साधारण तहका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक २४.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६९३.९० पुगेको छ ।
सरकारी निकायतर्फ निजामति कर्मचारीको औसत तलब सूचांक अघिल्लो आवमा ३९३.१४ थियो । गत आवको सोही अवधिमा १३.४५ प्रतिशतले बढेर ४४६.०४ पुगेको छ ।
निजामति कर्मचारीमा अधिकृति तहका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक अघिल्लो आवमा ३५८.८३ थियो । जुन गत आवको सोही अवधिमा १७.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४२१.४५ पुगेको छ ।
साथै साधारण तहका निजामति कर्मचारीको तलब सूचांक अघिल्लो आवमा ४६६.०३ थियो । जुन गत आवको सोही अवधिमा १९.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५५६.४१ पुगेको छ ।
मास्क नलगाइकन हिँड्नेलाई मुर्गा बन्ने सजाय !
बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो ?
PULSES PRO ५ दिन देखि बे’पत्ता १६ वर्षीया युवतीको श’व फेला , ह’ त्या’को आ’रोपमा ४ जना प’क्राउ
ड्यूटीमै बेहोस भएका प्रहरी जवानको मृत्यु